''Waxa socota dadka diiwaangelintisa''
7 Feb 7, 2013 - 6:32:36 AM
Iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay magaalada Badhan ee Caasumadda gobolka Sanaag ka socdeen is diiwaan gelinta urur siyaasadeedyada Puntland ayaa waxaa maanta 07 February,2013 si toosa uga billoowday halkaasi diwaan gelinta taageerayaasha Horseed.
Wakiilka urur siyaasadeedka talada haya ee Horseed ahna Guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Ismaaciil Ciyoon ayaa Radio Garoowe u sheegay in Guddiga doorashooyinka Puntland oo maalmahanba ku sugnaa Badhan ay ku hawlan yihiin sidii ay halkaasi ugu dhici lahayd diiwaan gelinta taageerayaasha urur siyaasadeedyada.
Guddoomiye Ciyoon ayaa intaasi ku daray in urur weliba laga doonayo
330 taageere oo uu halkaasi ku yeesho si' taasi loo xaqiijiyana uu guddigu ku hawlan yahay sameynta aqoonsiyada dadka taageerayaasha ah ee urur walba uu ku naaloonaya,
"Shalay & doraad waxaa is diiwaan geliyay taageerayaasha ururada kala ah Midnimo & Hor-cad,maantana waxaa is diiwaan gelinaya Horseed & UDAD, iyadoo maalinta berrito ahna la diiwaan gelin dono ururka Wadajir" Ayuu yiri Ciyoon.
Shanta urur siyaasadeed ee xafiisyada ka furtay magaalada Badhan ayuu guddoomiyuhu sheegay inuu ugu cad ad yahay uguna taageera badan yahay ururka muxaafidka ah ee Horseed, wuxuuna sheegay iney halkaasi ku leeyihiin dhowr xafiis oo si habsami leh u shaqeeya.
Guddoomiye ciyoon ayaa ugu dambeyntii bulshada Puntland gaar ahaan
shacabka Sanaag kula dardaarmay iney adkeeyaan nabadgelyada iminka dalka ka jirta isla markaana qaataan nidaamka axsaabta badan oo horumar u horseedaya Puntland.
Halkan ka dhagayso waraysiga uu guddoomiyhu la yeeshay Sooyaal